July Dream: Blogger Blood Drive & Me
Posted by JulyDream at 9:16 AM
သာဓုပါရှင့်။ သွေးလှူတာ သိပ်မွန်မြတ်ပါတယ်။ GreenGirlတော့ တစ်ခါပဲ လှူဖူးတယ်
အရင်၁ ခါသွေးလှူပွဲတုံးကလိုကောမန့်ပဲ ထပ်ရေးတော့မယ်...
သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓုပါ
ဘာလဲလိဲု့ …….လာမေးမယ် မဟုတ်လား။ သနားလို့ အဖြေပေးလိုက်မယ်။ ဘာဖြစ်လို့ ဆရာမလေးတွေနဲ့သိနေရတာလဲလို့။ ရန်ကုန်မှာတုံးက ဆရာမများဂေဟာ မှာ one of the ခိုင(်သော်တာဆွေ ရညာ်စားနာမည်)်နဲ့ ရည်းစာဖြစ်ခဲ့လို့ ဖြစ်မယ်။
ကြော်ငြာတွေ တင်ပေးတာ ဘလော့ပိုင်ရှင်တွေကို ကြော်ငြာခ ပိုက်ဆံပေးပါတယ် တစ်နှစ်ကျော်ကျော်ကြာတာမှာ တော်မီတောင် စင်ကာပူဒေါ်လာ၁၀၀လောက်ရနေပြီ. ပိုက်ဆံမထုတ်သေးတာ..
Sorry Tommy ရေ...
ကြော်ငြာခအတွက် ပိုက်ဆံ မရဘူး ထင်လို့ပါ။ အခုလို သိထားတာလေးကို ရှင်းပြတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မွန်မြတ်တဲ့ ကုသိုလ်အတွက် သာဓု ၃ ကြိမ် ခေါ်ပါတယ်။ လေးစားမိပါတယ်
ရှိရှိသမျှ အလှူဒါနတွေထဲမှာ ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းလှူဒါန်းခြင်းဖြစ်တဲ့ သွေးလှူဒါန်းခြင်းဟာ
မွန်မြတ်ဆုံးသော အလှူဒါနပါပဲ ...ကိုဂျူလိုင် ...
ကြည်နူးဝမ်းမြောက်စွာ သာဓု သုံးကြိမ်ခေါ်ဆိုမိပါရဲ့ဗျာ ...။
သာဓုတွေ ခေါ်တဲ့သူတွေအတွက် အမျှတွေ ပေးလိုက်ပါတယ်။ reverse engineering လို့ သဘောထားကျပေတော့။ အဟီး...